1. Inona no atao hoe Phenylpiracetam?
2. Ahoana ny fiasan'ny Phenylpiracetam ao amin'ny atidoha?
3. Tetik'asa Phenylpiracetam
6. Inona ny maha-zava-dehibe an'ireny fonosan'entana tsy mitongilana ireny?
7. Phenylpiracetam miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa
8. Ahoana no haka ny Phenylpiracetam?
9. Fiarovana Phenylpiracetam
Ny iray amin'ireo mason-tsivana malaza indrindra amin'ny atidoha izay mampitombo ny fahalalana, ny fihetseham-po, ny fahatsiarovana ary ny fiasan'ny vatana Phenylpiracetam. Ity fanafody ity dia fanatsarana ny piracetam izay novolavolaina tao 1983 tao amin'ny Akademia Rosiana an'ny Siansa. Ny zava-mahadomelina dia natao mba hanampiana amin'ny fitsaboana ny adin-tsaina maharitra fa maro ny cosmonauts no niaina nandritra ny asa misiona malalaka. Na dia voafetra ho amin'ny fikarohana sasany natao tany Rosia aza ny fikarohana momba ny Phenylpiracetam, dia hita fa mahomby ny fitsaboana amin'ny famerenana indray ny asan'ny neurologique, manampy amin'ny fampihenana ny fahaketrahana, ary hampiroborobo ny asan'ny kognita amin'ny marary organika.
Ny zava-mahadomelina hatramin'ny niorenany tany Rosia dia nivarotra teo ambanin'ny famonoana Phenotropil hatramin'ny taona 2017. Ny Phenylpiracetam dia zava-mahadomelina voafetra izay amidy amin'ny dokotera na ny dokotera mpitsabo. Na dia izany aza dia nijanona ny famokarana io fitaovana mahery vaika amin'ny atidoha io noho ny fisondrotry ny fifandonana eo amin'ny orinasa Rosiana Valenta izay mpamokatra zava-mahadomelina sy ilay mpamorona Phenotropil Valentina Akhapkina. Ny Phenylpiracetam dia novokarin'ny orinasa vaovao noforonina antsoina hoe Vira Innfarm. Ahoana ny fiasan'ny Synephrine HCL eo amin'ny vatanao?
Any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao sy ny maro hafa any Amerika Avaratra, ny Phenylpiracetam dia ampiasaina ho toy ny nootropic ary fantatra amin'ny fampivoarana ny fahatsiarovan'ny olombelona, ​​ny faharetana ara-batana, ny famokarana ary ny fifantohana. Ny zava-mahadomelina dia tsy maintsy ankatoavin'ny United States of America Food and Drug Administration. Noho izany, any Etazonia dia tsy voafetra ny Phenylpiracetam ary azo vidiana, ary amidy ara-dalàna. Na izany aza, any Kanada, ny zava-mahadomelina dia tsy azo amidy ara-dalàna, fa ny iray dia afaka mametraka sy mampiasa azy tsy mifanohitra amin'ny lalàna. Etsy ankilany, ny Masoivoho Iraisam-pirenena misahana ny Doping dia nandrara ny fampiasana ny Phenylpiracetam amin'ny atleta noho ny fanamafisana ny fananana ary koa ny fanampiana ireo mpampiasa dia maharitra mangatsiaka be.
Inona no atao hoe Phenylpiracetam?
Phenylpiracetam (77472-70-9) dia anisan'ny vondrona mpihinana zava-mahadomelina. Ny zava-mahadomelina dia misy anticonvulsant, nootropic, antiasteicheskoe, fihetsika anxiolytika ary neuro modulating. Ny Phenylpiracetam koa dia manana fiantraikany amin'ny atidohanao izay manatsara ny fahatsaran'ny vatana amin'ny ankapobeny. Nampiasain'ireo atleta tamin'ny voalohany ny zava-mahadomelina mba hanampiana azy ireo hanatsara ny fahombiazany sy hanatratrarana ny tanjon'izy ireo. Indrisy anefa fa nandritra ny taona vitsy farany dia voarara ny fampiasana zava-mahadomelina nandritra ny fanatanjahantena taorian'ny nahitana fa nanome atleta ho an'ny hafa izy. SARM fanampiny ao amin'ny Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
Ny zava-mahadomelina dia fantatra amin'ny fanentanana ny mpikiraky ny neuron ao amin'ny rafi-pitantanana afovoan-drivotra izay tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovana sy ny fomba fisainana toy ny mpitsabo GABA, ny mpitsabo NDMA, ary ny acetylcholine. Ny fianarana ihany koa dia mampiseho fa ny fanafody dia afaka mampitombo ihany koa ny asa ataon'ny dopamine receptors. Ny Phenylpiracetam dia tsy misy rano tsy misy rano izay an'ny sokajy simika racetam ary amin'izao fotoana izao no racetam indrindra indrindra. Na dia eo aza ny fandrosoana ao Rosia, nahitana laza any amin'ny faritra samihafa maneran-tany ny zava-mahadomelina na dia mivarotra izany amin'ny marika hafa.
Afaka mandany haingana ny zava-mahadomelina avy amin'ny sehatra sy fivarotana maro samihafa ianao, na izany aza, aza ampiasaina raha tsy misy dokotera. Raha tranga ianao, atleta mavitrika, aza misalasala mampiasa io zava-mahadomelina io satria efa nandrara azy ity ny sampan-draharaha misahana ny doping. Anontanio ny dokotera aminao mba hitarika anao mandra-pahavitanao ny tsingerin'ny rongony. Aza mampiasa ny Phenylpiracetam, satria ny namanao dia mampiasa azy io satria mety ho tena mampidi-doza ny fahasalamanao.
Ahoana ny fiasan'ny Phenylpiracetam ao amin'ny atidoha?
Ny phenylpiracetam sy piracetam dia manana rafitra simika mitovy ihany, ny fahasamihafana dia ny fampidirana ny vondrona phenyl mifototra amin'ny rafitra. Ny anjara asan'ny tarika phenyl dia ny hampitombo ny fahafahan'ny zava-mahadomelina hamongorana ny menaka, ny matavy, ary ny lipida izay mampitombo ny fampidirana ny Phenylpiracetam ao amin'ny vatanao. Raha mijery an'io zava-mahadomelina io ianao, dia azonao atao ny mamantatra hoe inona no mahatonga azy io ho mafy kokoa noho ny piracetam tany am-boalohany sy ny fomba mora entina ao amin'ny vatana, ary mora foana ny mandalo amin'ny sakana eo amin'ny ra sy ny atidoha. Phenylpiracetam (77472-70-9) dia zava-mahadomelina mahomby izay miasa haingana kokoa amin'ny fampiharana azy ao amin'ny vatanao.
Ny atidohanao dia hahita ny zava-mahadomelina ao anatin'ny 30 minitra aorian'ny fanindroany. Na izany aza, dia misy antsasa-manila fohy eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 7 ora. Midika izany fa aorian'ny fitsaboana ny fanafody dia hahatsapa ny vokatra feno mandritra ny ora 5 ianao, arakaraka ny tanjaky ny vatanao. Ny olona sasany dia hankafy ny valiny momba ny ora 7 raha toa ny hafa dia tsy afaka mandeha mihoatra ny ora 5 izay mahazatra. Na izany aza, raha mitoetra lavitra noho ny fe-potoana ny vokany, dia araho avy hatrany ny dokotera. Ny vatan'olombelona dia sarotra, ary mety hifanohitra amin'ny vatanao ny zava-mahadomelina ary mety hitarika ho amin'ny fiantraikany mafy. Mety hisy vokany maharitra eo amin'ny vatanao sy ny atidoha izany. Noho izany, tadidio foana ny doka mety, ary araho ny torolalan'ny dokotera. Satria i Phenylpiracetam dia zava-mahadomelina haingana, tsy tokony hijanona ho mavitrika ao amin'ny vatanao mandritra ny fotoana maharitra.
Ao amin'ny atidoha, manana fomba fiasa isan-karazany ny zava-mahadomelina, ny ankamaroan'izy ireo dia mifototra amin'ny fanentanana ny famokarana neurotransmitters samihafa. Ny Phenylpiracetam dia miasa toy ny ampakine izay mampitombo ny fiakaran'ny neurotransmitter amin'ny glutamate amin'ny fanentanana ny mpitsabo AMPA. Ny hetsika zava-mahadomelina dia tena mifandray amin'ny fanatsarana ny asan'ny kognitive ary afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fahafahan'ny zava-mahadomelina hanatsara ny fifantohan-tsainao sy ny fahatsiarovanao amin'ny fotoana iray ihany koa. Avy amin'ny fianarana biby nataon'ireo manam-pahaizana samihafa, ny vokatra dia mampiseho fa ny Phenylpiracetam dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny dopamine fanampiny dopamine, amin'ny fomba roa, 1) amin'ny ataony ho dopamine reuptake inhibitor sy 2) amin'ny alàlan'ny fampiharana ny dopaminergic rafitra.
Dopamine dia hevi-pitenenana vaovao izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny faharisihana, ny fiheverana, ny fahatsiarovan-tena, ny fihetsehana ao amin'ny vatana ary ny fanaraha-maso ny fihetseham-ponao. Raha vao mihalehibe ny habetsaky ny dopamine ao amin'ny vatanao, dia ho azonao antoka ny vokatra tsara azo avy amin'ny Phenylpiracetam, izay ahitana ny fihetseham-po mivoatra, mifantoka ary manosika ny maro hafa izay horesahina any aoriana ato amin'ity lahatsoratra ity. Ny dopamine no dingana mivantana ho an'ny neurotransmitter neoprotensmitter norepinephrine izay mampitombo ny tosidra, ny siramamy mivoaka amin'ny fo, ny taham-pitenenana fo ary koa ny fatin-doko. Ny vokatr'izy ireo dia saika mitovy ary mifandray akaiky amin'ny faharetan'ny Phenylpiracetam sy ny fitomboan'ny angovo.
Tahaka ny karazana racetam nootropic, ny Phenylpiracetam koa dia tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny famokarana acetylcholine ary antsoina koa hoe "ny neurotransmitter fianarana" noho ny fifandraisana akaiky amin'ny hevi-dehiben'ny lafiny. Ny atidohan'olombelona dia mampiasa ny choline mba hamokarana ny acetylcholine ary mety tsy ho tapaka ny fivarotany rehefa mandray racetams ianao. Noho izany, izany no antony itiavana ny hitondra ny Phenylpiracetam miaraka amin'ny choline fanampiny. Amin'ny ankapobeny, Phenylpiracetam dia samy manana ny asany samihafa ao amin'ny atidohanao toy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny saina amin'ny fomba samihafa. Ireo sehatra lehibe miompana amin'io zava-mahadomelina io dia ahitana ireto manaraka ireto.
1. Amin'ny fampandrosoana
Raha vantany vao raisinao ny doka Phenylpiracetam tsara, dia miasa tsara amin'ny fampitomboana ny haavon'ny neuroreceptors. Araka ny voalaza terỳ aloha, ny fanadihadiana dia naneho fa ny Phenylpiracetam dia mandrisika ny famokarana receptors isan-karazany ao amin'ny atidoha toy ny dopamine, GABA, ny NMDA ary ny acetylcholine. Ny vokatr'izany dia mitarika ny fananganana ireo fitaovana tena ilaina amin'ny fifindran'ny otrik'aretina ary koa ny fanamafisana ny fahombiazan'izy ireo. Tahaka an'i Adderall sy Ritalin, Phenylpiracetam dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny dopamine ao amin'ny atidoha. Izany dia mampitombo ny fahalalana, ny fahaiza-manaon'ny fanapahan-kevitra, ary ny fahamalinana.
Na izany aza, ny Phenylpiracetam dia tsy misy fiantraikany mahery vaika toy ny Adderall sy Ritalin. Midika izany fa tsy hihatsara velatsihy ianao, manelingelina na mety ho reraka rehefa mampiasa ny zava-mahadomelina. Azonao atao kosa ny mahazo fahafinaretana sy fiaretana ara-batana ary koa ny fitomboan'ny hery ao amin'ny vatana. Ho an'ny atleta, ny vaovao ratsy dia hoe voarara ity fampiasana zava-mahadomelina ity taona vitsivitsy lasa izay ary tsy ho tonga lafatra ho anao raha mikasa ny handray anjara amin'ny Olaimpika ho avy ianao. Azonao atao anefa ny mijery ny dokotera mba hanamarina raha afaka mahazo fanafody hafa azo antoka ianao izay hanampy anao hampitombo ny herinao, hifantohana ary ny tanjaky ny vatanao.
2. Mampihena ny fahaketrahana sy ny fanahiana ny rongony
Ny Phenylpiracetam koa dia vahaolana tsara ho an'ireo izay mijaly amin'ny fahaketrahana sy ny fanahiana. Tahaka ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina ho famporisihana, ny vokany dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny fahaketrahana sy ny soritr'aretina. Fampitomboana ny famokarana solona maro ao amin'ny atidoha toy ny GABA, glutamate, ary Choline dia misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny serotonin sy GABA ny neurotransmitter. Ho setrin'izany, ny Phenylpiracetam dia mameno ny sainao amin'ny neurochemicals izay tena ilaina amin'ny fanampiana anao manalefaka. Ny atidohanao dia mila miala sasatra sy mangatsiaka ho anao mba tsy hieritreritra be loatra ary koa hampihenana ny fanahiana sy ny adin-tsaina amin'ny fotoana iray. Ny dokotera dia afaka manolotra an'io zava-mahadomelina io raha toa ka avo loatra ny elanelam-bolo-nao ary tsy nahavita nanampy anao ny fomba hafa rehetra.
Ity zava-mahadomelina ity dia manolotra tombontsoa maro ho an'ny mpampiasa rehetra, anisan'izany ny mpanao biriky, atleta ary mpampiasa hafa izay te-hiaina ny tombontsoa Phenylpiracetam. Ny fampiasana ny pilina amin'ny fomba mahitsy sy ny fananana dosage tsara, dia ho azonao antoka fa hiaina ireto vokatra tsara ireto.
1. Ampitomboy ny fanandramana sy ny fahatsiarovana
Ny fianarana sy ny fisedrana maro samihafa natao mba hamaritana ny fahombiazan'ny Phenylpiracetam, dia nampiseho fa ny fitsaboana dia afaka manampy amin'ny fanatsaràna ny fahalalana amin'ny marary na ny marary organ-lozika. Na dia tsy misy fanadihadiana fantatra na misy ny dokam-barotra momba ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina momba ny fahasalamana sy ny tanora, ny ankamaroan'ireo izay mampiasa ny zava-mahadomelina dia nitatitra vokatra tsara toy ny fanomezana azy ireo ho mailo, hamokatra ary hijanona ho tony. Amin'ny lafiny iray, mpampiasa an'arivony koa dia miteny fa taorian'ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia nitombo ny fahatsiarovany ary afaka nahatsiaro zavatra maro izy ireo, anisan'izany ny fahatsiarovany taloha. Ny fikarohana biby dia mampiseho ihany koa fa ny Phenylpiracetam dia misy endri-panoherana maneso. Indraindray rehefa mihena ny fahatsiarovan-dry zareo ny olona dia mety hidina na koa noho ny aretina azo avy amin'ny ati-doha izay mametraka ny fifantohana sy ny fahalalana. Ny Phenylpiracetam dia lasa ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fahatsiarovana sy ny ankamaroan'ny olana momba ny atidoha.
2. Fiarovana tsara indrindra
Inona no mahatonga an'io zava-mahadomelina malaza eo amin'ny bodybuilders sy ny atleta io ny fahafahany manatsara ny hery ara-batana manerantany izay manampy azy ireo hahatratra ny tanjon'izy ireo? Ny Phenylpiracetam dia manana rafi-simika mitovy amin'ny an'ny phenethylamine, toy ny Adderall izay iray hafa koa mampivelatra hery fanampiny. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny olona mijaly amin'ny rà latsaka ambany dia ao amin'ny atidohany dia misy fepetra fantatra amin'ny anarana hoe ischemia na aretina miteraka reraka, Phenylpiracetam dia afaka manampy azy ireo ho sitrana rehefa avy nampiasa ny zava-mahadomelina nandritra ny iray volana farafahakeliny. Ny fanafody dia manatsara ihany koa ny fikarakarana ara-batana sy ny fihetsiketsehana, izay manome hery be ny mpampiasa. Ny ankamaroan'ny tatitra momba ny Phenylpiracetam dia manondro fa ny rongony dia manampy azy ireo hampihena ny reraka, hanatsara ny vokatra ary koa ny fitomboan'ny fiaraha-monina.
Ny hetsika nataon'ny Masoivoho manerantany manerantany no mandika ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity ihany koa dia mampiseho ny fomba hanampiana azy hampiroborobo ny hery entin'ny atleta ho an'ny atleta mampiasa izany, hanomezana tombony azy ireo amin'ny hafa. Na izany aza, amin'ny hetsika fanatanjahan-tena hafa izay tsy misy fitsaboana drôna, ny phenylpiracetam dia nanampy atleta maro hahatratra ny tanjony. Ny zava-mahadomelina koa dia miasa tsara kokoa noho ny famenoana mialoha ny fanampiana ny olona hanana ny hery ilaina hampiofanana amim-pahombiazana. Tsarovy fa ny Phenylpiracetam ihany no tena ilaina raha mampiasa azy eo ambany fanaraha-maso ny dokotera ianao ary manaraka ny torolàlana ampiasaina.
3. Manampy amin'ny fampihenana ny fahaketrahana sy ny fanahiana
Ny fikarohana klinika dia manondro fa ny Phenylpiracetam dia mampihena amim-pahombiazana ny fahaketrahana sy ny adin-tsaina ho an'ny 99% amin'ireo marary mijaly amin'ny fahasimban'ny atidoha, ny famelezana na ny fandidiana ao anatin'ny iray volana monja. Tahaka izany ihany koa, fianarana iray ahitana ny marary 35 izay voan'ny aretim-po izay nizaka ny hakiviana sy ny aretin'ny tebiteby, taorian'ny herinandro 12 momba ny fitsaboana tamin'ny fampiasana Phenylpiracetam dia nihena ny isa. Na izany aza, taorian'ny valo herinandro teo ho eo dia nihena ny fahombiazan'ny rongony. Ny vokatr'izany fanafody izany dia vokatry ny fitomboan'ny mpitsabo GABA izay ahafahan'ny atidoha miala sasatra.
4. Phenylpiracetam dia afaka mitondra ny epilepsy
Ny Epilepsy dia aretina mitaiza izay vokatry ny fikorontanan'ny herinaratra tampoka ao an-tsainao. Ny fampihenana an'io herinaratra io dia miteraka ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana eo amin'ny selan'ny atidoha. Manatsara ny fifandraisana amin'ny atidoha ny Phenylpiracetam, noho izany ny fampihenana ny fisamborana. Ny fikarohana samihafa sy ny fitsapana momba ny fitsaboana dia nampiseho fa rehefa ampiasaina mandritra ny roa volana isan'andro ny fanafody dia mety ho fanafody tsara indrindra amin'ny fitsaboana aretina rehefa ampiasaina amin'ny fanafody famonoana olona hafa. Amin'izany fotoana izany, ny fampiendrehana ny Phenylpiracetam sy ny fanafody fitsaboana hafa, mampitombo ihany koa ny asan'ny kognita. Ny fanafody ihany koa dia mampihena kely ny fidirana ao amin'ny atidoha izay mifehy ny neurons ho an'ny motera.
Ny tombotsoa hafa ananan'io Phenylpiracetam io dia manome ny maro amin'ireo mpampiasa azy dia ahitana ny fanatsarana ny tsy fahampian'ny vatan'ny olona, ​​ny fampihenana ny lanjany, ny fahatsaran'ny vatana amin'ny ankapobeny. Misy vokany tsara maro izay tianao hampiasainao amin'ny zava-mahadomelina mahatalanjona. Ho an'ireo atleta mavitrika mandray anjara amin'ny lalao mafampana voarara ity medikaly ity dia tokony hialàna amin'ny zava-mahadomelina izany satria afaka manonofy ny asanao. Na izany aza, raha toa ka manana fepetra izay mety hitondran'ny Phenylpiracetam ianao, tsy hanana safidy ianao fa hihevitra ny zava-mahadomelina satria ny fahasalamanao koa dia tena ilaina.
Na dia maro aza ny tsara Ny vokatra Phenylpiracetam, ny zava-mahadomelina dia manana fiantraikany hafa koa izay hiainanao rehefa manohy miaraka amin'ny dosage ianao. Na izany aza dia mety ho kely ny vokatra hafa raha mampiasa ny fanafody araka ny torolalan'ny dokotera ianao. Indraindray dia mety haneho fihetsika mifanaraka amin'ny vatanao ny rongony raha tsy efa manantena azy ary mampiseho anao amin'ny fiantraikany mahery vaika. Ny vatan'olombelona dia sarotra indraindray ary angamba mety hihemotra ny eritreritrao izay hiasa aminao. Ny sasany amin'ireo loza Phenylpiracetam mahazatra izay mety hiainanao aorian'ny fitsaboana anao;
aretin'andoha; Ny ankamaroan'ireo mpisera Phenylpiracetam dia mitaraina noho ny fahatsapana aretina mafy manjavona rehefa afaka fotoana fohy raha toa ny mpampiasa sasany no mahatsapa izany mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny hafa. Tokony hampidirina miaraka amin'ny Phenylpiracetam ny fanafody Choline mba hanampy amin'ny fampihenana ny aretina. Raha toa ka mitombo ny fotoan-tsarotra mandritra ny androm-piainana noho ny halavan'ny androm-piainana dia mila mampahafantatra avy hatrany ny dokotera ianao mba hahitana sy hamaha ilay olana. Rehefa miharatsy ny toe-javatra dia mety ho voatery hampijanona ny dosage ny dokotera mba hahitana fanafody mahazatra anao.
mahita tory; Ny fahatongavanao ny Phenylpiracetam amin'ny andro, dia mety ho sahirana ianao rehefa mitady torimaso amin'ny alina. Ny voka-dratsin'ity zava-mahadomelina ity dia mila fotoana tsara, ary izany no antony tokony hakana ny dosage vao maraina sy ny fiandohan'ny tolakandro. Vao miala sasatra mandritra ny antsasaky ny zava-mahadomelina ianao rehefa mahazo tory tsara. Noho izany dia andramo foana ny fampiasanao amin'ny fotoana mba tsy hisian'ny fahasarotana rehefa mila matory ianao. Tsarovy fa ny aretin'ny torimaso dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fiasa ara-dalàna ny vatanao ary koa ny fiantraikany eo amin'ny fahazarana miasa mahazatra. Mifandraisa amin'ny dokotera raha tsy ampy torimaso ampy ianao rehefa avy nisotro rongony.
Ny Phenylpiracetam dia mety hampirisika ny hatezerana henjana; Ireo sasany amin'ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia mitaraina noho ny fampivoarana na ny fitomboan'ny hatezerana aorian'ny fitsaboana fanafody, izay indraindray dia manery azy ireo hanao asa na handray andraikitra izay manenjika azy any aoriana. Indraindray dia mety hahatsapa ny fisainana mamono tena izay mampidi-doza indrindra. Ireo izay mijaly amin'ireto zava-manan'aina manaraka ireto dia tokony hitandrina ary hitady fanampiana ara-pitsaboana alohan'ny hahatongavan'ny farany. Ny olona tezitra dia mety tsy ho afaka hifehy ny hatezerany aorian'io fanafody io.
mora tezitra; Tahaka ny piracetam, ny fampiasana Phenylpiracetam dia mety hitarika amin'ny loza sasany toy ny fahasosorana. Indraindray dia mety hahatsapa ny fahasosorana aorian'ny fitsaboana ny doses mandritra ny fotoana fohy ary ny vahaolana dia ny mampihena ny dosage. Ny dosie avo Phenylpiracetam dia matetika mifandray amin'ny fahasosorana. Ampahafantaro ny dokotera rehefa manomboka mahatsapa ny voka-dratsiny ianao hanampy anao hahita lalana.
Ny vaovao mahafaly amin'ny loza amin'ny Phenylpiracetam dia ny hoe afaka mifehy azy rehetra ny fampahalalanao ny dokotera amin'ny fotoana. Ny fanesorana ny dosage voalohany, dia mety tsy ho tratran'ny fiantraikany hafa ianao satria ny dosages dia mazàna ambany kokoa ho an'ireo vao manomboka. Amin'ny tranga sasany, na dia ireo mpampiasa vaovao aza dia manomboka mitrandraka ny vokatra hafa avy hatrany rehefa mandray ny dosage voalohany. Ny rafitra ataon'ny olona dia samy hafa ny vokatra samihafa, toy ny Phenylpiracetam.
Maro ny olona mividy kapsilaka na vovoka Phenylpiracetam miaraka amin'ny stacks hafa mba hanatsarana ny fampiasana ny zava-mahadomelina sy ny traikefa tsara kokoa aorian'ny fitsaboana azy. Ny stenylpiracetam dia singa ilaina amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny saina sy ny fampihenana ny fihenan'ny kognita izay matetika no olana mahazatra amin'ny vanim-potoanan'ny olona. Azo ampiasaina irery ny zava-mahadomelina, saingy lasa mahasoa kokoa izany raha toa ka miaraka amin'ny dosage samihafa. Ny Phenylpiracetam Stacks koa dia manampy amin'ny fampihenana ny voka-bary mety hitranga aorian'ny fitsaboana azy. The tootropic stacks Mampifandray amin'ny vokatra fanatsarana atidoha maro mikendry faritra samihafa amin'ny fahaizanao ara-tsaina. Ny Phenylpiracetam Stacks mahazatra dia ahitana ny Noopept, choline ary Phenibut. Misy ihany koa ireo nootropika hafa izay mety ho mifototra amin'ny Phenylpiracetam toy ny piracetam, oxiracetam, Adrafinil, ary aniracetam eo amin'ny maro hafa. Jereo ny mpivarotra nootropic akaiky indrindra na mitady fampahalalana bebe kokoa avy amin'ny dokotera.
Inona ny maha-zava-dehibe an'ireo fonosan'entana tsy mitongilana ireo?
Misy ny antony maro samihafa mahatonga ny olona hampiasa ny fonosana tsy mitongilana manakaiky ny Phenylpiracetam izay ny sasany dia toy izao manaraka izao;
Mba hanamafisana ny fahatsiarovana sy ny fanabeazana maharitra maharitra
Hanamafy ny fanoherana ny hafanana mangatsiaka
Mba hanampiana azy ireo ho tony rehefa voatohina izy ireo
Mba hampihenana ny vokatry ny tsy fahampian-torimaso izay matetika amin'ny fampiasana ny Phenylpiracetam
Ho fampivoarana ny fahaiza-mamaha olana
1. Phenylpiracetam sy Choline Stack
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny Phenylpiracetam sy ny Choline Stack no fitsipika fototra sy ampiasaina indrindra. Manampy ny cholinergic ny neurotransmission ao amin'ny atidohanao. Ny fampiasana ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny choline dia mampiroborobo ny fahatsapana ara-tsaina sy ny fiantraikany tsara eo amin'ny fahatsiarovanao raha kely indrindra ny fiantraikany eo amin'ny fiantraikany mahatsiravina toy ny aretin'andoha izay manahirana ny mpisera Phenylpiracetam. Choline (C5H14NO) izay sakafo ara-tsakafo ara-boajanahary, dia miasa toy ny atidoha ho an'ny neurotransmitter acetylcholine precursor. Manamora ny fifandraisana misy eo amin'ny neuronal na nerve ny mpandinika ny neurotrans-by, ka mitarika famantarana eo anelanelan'ny sain-kevitry ny sainao izay tompon'andraikitra amin'ny anjara asan'ny neurologique. Ny acetylcholine dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fahalalana, fahatsiarovana ary fahatsapana. Ny asetylcholine hafa dia misy;
Fampitomboana ny fifandraisana an-telefaona amin'ny rafi-pitabatabana
Manamaina ny asan'ny atidoha isan-karazany toy ny antony manosika, ny fiheverana, ny fitsanganana, ary ny fahatsiarovana.
Asa toy ny neuromodulator sy neurotransmitter ao amin'ny atidohanao
Miasa toy ny mpanelanelana anatiny ao amin'ny rafi-pandrenesana mampihetsi-po sy mampihetsi-po.
Ny iray amin'ireo fomba fiasan'ny Phenylpiracetam dia ny fanamafisana ny asetylcholine atao any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny atidoha mifandray amin'ny famolavolana fahatsiarovana ary koa ny fanatsarana ny fiovan'ny choline ho acetylcholine. Raha jerena ny tsikera maro momba ny choline, dia ho hitanao fa manampy olona maro mpampiasa phenylpiracetam hampihenana ny aretina aterany izy ireo aorian'ny fitsaboana azy. Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no hankafy ny tombony amin'ny fampifandraisana ny choline sy ny Phenylpiracetam, raha toa ka tsy misalasala ny hifandray amin'ny dokotera ny aretin'andoha. Ny dosage voatokana amin'ny choline dia tokony 100mg Phenylpiracetam ka hatramin'ny 250mg Citicoline (CDP Choline). Ny mpandidy dia tokony hanomboka amin'ny dosage ambany izay azo tsidihina tsikelikely. Tokony hofanina ny famaritana kôlônina raha tsy mahatsapa ny tombontsoa ho an'ny petrabola ianao.
Indraindray ny Phenylpiracetam dia azo raisina miaraka amin'ny Noopept, izay koa ny dika piracetam izay heverina ho 1000 mahery kokoa noho ny aretin'ny karazana. Etsy ankilany, ny Phenylpiracetam dia 60 ampahery mahery noho ny racetam tany am-boalohany. Noho izany, ny firafitry ny stack Noopept sy ny Phenylpiracetam dia mamorona vondrona mavitrika izay hanome vokatra tsara. Ny Phenylpiracetam Noopept stack dia tokony horaisina amin'ny dosia ambany noho ny vokatra tsara sy tsara. Noopept (C17H22N2014) dia tsy racetam ara-dalàna raha tsy misy ny 2-oxo-pyrrolidone rafitra. Ny Phenylpiracetam Noopept Stack dia amin'izao fotoana izao, ampiasaina any amin'ny firenena samihafa any Eoropa Atsinanana sy Rosia ho toy ny fitsaboana ara-pahasalamana. Ny ankamaroan'ny fianarana dia nifantoka tamin'ny fiantraikan'ny Noopept amin'ny fiarovana ny neurônina ao amin'ny atidoha avy amin'ny karazana fahasimbana isan-karazany ary miteraka vokatra anxiolytika.
Ny antony lehibe mahatonga ny olona handray an'i Noopept dia ny fanampiana ny pao hanatsarana ny fifantohan-tsaina, ny fifantohana ary ny fampitomboana ny famolavolana fahatsiarovantena ary ny fanatsarana ny asan'ny kognita amin'ny ankapobeny. Na dia tsy misy fanazavana momba ny fitsaboana aza amin'izao fotoana izao, dia afaka manombana ny fahombiazan'ity Phenylpiracetam Noopept Stack ity, ny porofo tsy azo lavina sy ny fijoroana vavolombelona dia mampiseho fa ny fitambarana dia miasa tsara amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny asan'ny atidoha. Ny ankamaroan'ny mpampiasa misitera dia mitatitra fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampitomboana ny hery entin'ny orinasa sy ny fanentanana ara-tsaina izy io raha tsy mampiharihary ny mpampiasa azy ireo amin'ny fiantraikany ratsy. Ny pao dia ho mora kokoa aminao ny mifantoka amin'ny fotoam-paharetana nefa tsy mahatsapa ny fahakiviana ara-tsaina. Ataovy izay hahazoana antoka fa takatrao ny vokatry ny Noopept sy ny Phenylpiracetam alohan'ny hanapahanao hevitra hampiasa azy ireo ao amin'ny "stack nootropic".
Ny Phixlpiracetam iray hafa dia ny singa miaraka amin'ny phenibut izay manome vahaolana tonga lafatra mba hanamafisana, hampiroborobo ny saina sy ny fahatoniana rehefa voalamina tsara. Ny Phenibut (C10H13NO2) dia malaza amin'ny fanakorontanana ireo mpitsabo GABA-B. Ny fanafody dia mitovy amin'ny fomba hafa mitovy amin'ireo GABA-B mpikatroka agonista hafa izay ahitana Gabapentin, Baclofen, Pregabalin, ary GABOB. Ny Phenibut ihany koa dia zava-mahadomelina tena tsara ho an'ny fampihenana ny ahiahy, na dia toa tsy miteraka fikolokoloana ny rafi-pitabatabem-bahoaka aza rehefa raisina amin'ny dosia ambany. Hatramin'ny famolavolana ny fisebotan'ny 1960 ao Rosia, ny medikaly dia mbola fanafody prescription ho an'ny;
Mampihena ny fanahiana sy ny tahotra alohan'ny aorian'ny fandidiana
Ampio ny marary mba hisorohana ny fitsaboana ny alikaola
Ny fahaketrahana sy ny fitsaboana
Loza amin'ny tanjaka
Ny ankamaroan'ny mpisera Phenylpiracetam sy phoenibut stack dia nanome fanehoan-kevitra tsara momba ny fahaiza-manaony ahafahana manamaivana ny fanentanana mihoatra izay mety hitranga rehefa mitaky dose Phenylpiracetam lehibe. Ny hafa dia milaza fa mampirisika ny filaminana ara-tsaina ny tetikasa, ny fifantohana amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny fanamorana ny fitetezana. Na izany aza, ny zava-mahadomelina indraindray dia tsy mahavita mamaly tsara ny mpampiasa sasany, indrindra rehefa tsy ampiasaina matetika. Tadidio fa tsy tokony halaina mandritra ny fotoana lava sy amin'ny dosage avo ireo tsy mitongilana ireo. Miangavy mandrakariva amin'ny dokotera anao mba hanampy anao amin'ny fisafidianana ny "static nootropic right" amin'ny zavatra ilainao na toe-javatra. Ny dosage Phenibut dia tokony hivezivezy tsara mba tsy hisarihana ny mpampiasa hampandrosoana, ny fiankinan-doha, ary ny fialana amin'ny soritr'aretina hafa.
Phenylpiracetam miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa
Ny zava-mahadomelina Phenylpiracetam dia manana fifandraisana akaiky amin'ny zava-mahadomelina hafa, ary manome valiny mitovy amin'izany izy ireo saingy samy hafa amin'ny lafiny samihafa toy ny fahombiazany. Amin'ny maha mpampiasa anao dia tsy maintsy misafidy ny fanafody tsara indrindra ho anao ianao miankina amin'ny zavatra ilainao. Ny dokotera dia hanampy anao hisafidy ny zo tsy aotropic rehefa manao fikarohana momba ny fitsaboana mba hahatakatra ny toe-javatra iainanao. Ny dosage mety sy ny fikolokoloana koa dia tena ilaina amin'ny fanampiana anao hahatratra ny vokatra tianao.
Ny tantaran'ireo fanafody roa ireo dia azo tsapain-tanana amin'ny 1960 rehefa nivoatra izy ireo. Ny phenylpiracetam dia noforonina piracetam. Ary ny rafi-tsarimihetsika dia maneho ny fampidirana ny tarika phenyl amin'ny piracetam mba hamorona ny Phenylpiracetam izay midera anio noho ny fahombiazany ho famporisihana ny atidoha sy zava-mahadomelina zava-mahadomelina manan-danja. Ny Phenylpiracetam dia lazaina fa 60 isa mahery kokoa noho ny Piracetam tany am-piandohana ka mahatonga azy io ho zava-mahadomelina indrindra ho an'ny mpampiasa maro tsyotropic. Ireo zava-mahadomelina ireo dia tena ilaina amin'ny fampivoarana ny tontolon'ny ati-doha amin'ny ankapobeny toy ny fampivoarana ny fifantohana, ny fahatsiarovana, ny fahalalana ary ny fampiroboroboana ny tanjaka. Na dia ampiasaina amin'ny dosia kely aza ny Phenylpiracetam dia manaporofo fa mahery kokoa noho ny piracetam. Ny dokotera dia hanampy anao hanapa-kevitra ny tsara indrindra ho anao amin'ny fametram-pokontany na rehefa te hampiasa azy tsy miankina. Na dia miresaka momba ny fanafarana ny zava-mahadomelina roa aza ny olona sasany, tsy mbola mazava tsara ny fomba hahafahan'ireo zava-mahadomelina anankiroa ilaina raha ampiasaina amin'ny fotoana iray ihany satria ny phenylpiracetam dia mahery kokoa noho ny piracetam. Ny Phenylpiracetam dia mbola afaka manolotra vokatra tsara na dia tsy ampiasaina aza ny piracetam. Afaka manontany amin'ny manam-pahaizana ianao hahatakatra bebe kokoa momba ny fametahana ny zava-mahadomelina roa.
Mijery ny Modafinil sy Famerenana ny Phenylpiracetam, ho hitanao fa olona maro no nampiasa ny zava-mahadomelina roa no nitatitra fa miasa toy izany koa izy ireo. Na dia izany aza, ny Phenylpiracetam sy Modafinil ny tabilao dia miteraka vokatra mahavariana toy ny fanatsarana ny fifantohana sy ny fampitomboana ny hery ao amin'ny vatana. Ny pao dia hampitombo ny halalin'ny fisainana sy ny famoronana ary hampihenana ny tebiteby. Ireo zava-mahadomelina roa ireo dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fanatanjahantena sy ny fanatanjahantena Ny mpampiasa ny tatitra momba ny tetikasa Phenylpiracetam sy Modafinil dia mampihena ny trangam-pahantrana ary koa ny angovo mihamitombo izay ahafahan'izy ireo miasa mandritra ny fotoana maharitra sy hanatsara ny vokatra amin'ny asam-barotra samihafa. Na izany aza, tahaka an'i Phenylpiracetam, tao amin'ny 2004 Modafinil dia voarara amin'ny fampiasan'ny atletan'ny World Anti-Doping Agency. Semaglutide Effects Tahaka ny Peptide? TSIA, betsaka kokoa noho izany!
Ny fitoviana lehibe iray hafa eo amin'ireo fanafody roa dia ny fampiroboroboana azy ireo amin'ny lafiny hafa, izay heverina fa tsy dia kely loatra rehefa mandray ny doses tsara. Ny voka-dratsiny dia misy vatana, vava maina, lamosina ary tsy fahamaimaizana. Ny voka-dratsy rehetra dia tsy maharitra, fa raha toa ka ela izy ireo dia mitady vahaolana avy hatrany. Azonao atao ny mihevitra ny iray amin'ireo roa ireo satria izy rehetra dia hitondra vokatra mitovy amin'izany. Rehefa mampiasa fanafody roa izy ireo dia omeo ny torolalan'ny dokotera mba hahazoana vokatra tsara.
Ahoana no haka ny Phenylpiracetam? (Na Phenylpiracetam Dosage)
Ity zava-mahadomelina ity dia neken'ny mpahay siansa ho 50 hatramin'ny 60 fotoana mahery kokoa noho ny piracetam izay misy azy, izay midika fa tokony haka kely dosages ho an'ny Phenylpiracetam ianao mba hahomby amin'ny vatanao. Avy amin'ny fianarana, ny zava-mahadomelina dia hita fa anisan'ireo mafy indrindra amin'ny fanatsarana ny kognitives ary mampitombo ny famolavolana ny fahatsiarovan-tena, ny toe-tsaina ary ny fifantohana ara-tsaina. Etsy an-danin'izany, ity medikaly ity dia manamafy koa ny fanatsarana ny fahatsapanao sy ny antony manosika anao. Ho an'ireo atleta sy mpandoro bouddha, io fanafody io dia mety ho fanatanjahan-tena mialoha ny fanatanjahantena hanomezana anao hery matanjaka ary hampitombo ny fahaizanao ara-batana.
Ny dosiôna Phenylpiracetam dia mety miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa arakaraka ny tanjaky ny vatan'ny olona iray - ny dosie voatendry ara-pahasalamana avy amin'ny 100mg mankany 600mg izay tokony horaisina isan'andro. Ny doka mahazatra dia nalaina indroa isan'andro, ny iray maraina ary ny iray tolakandro. Aza misalasala manaparitaka ny tara-pahazonao amin'ny andro iray satria fankaherezana izay mety hitarika ny tsy fahitan-tory ary ho ela velona ianao hitady torimaso tsara. Azonao atao koa ny misafidy ny hampiasa ny Phenylpiracetam amin'ny andro voafaritra raha mila fifantohana fanampiny ianao na mila mampihena ny adin-tsainao. Azonao atao koa ny mieritreritra ny maka ny zava-mahadomelina isan-kerinandro ary mandehana ny herinandro manaraka. Mangataha ny dokotera mba hiaraka amin'ny Phenylpiracetam dosage cycle fa afaka mahazo aina ianao ary manampy anao hahatratra ny vokatra tianao.
Ny halavan'ny androm-piainana Phenylpiracetam amin'ny ora 5-7 saingy miankina amin'ny dosage azonao ny vokany. Indraindray ny zava-mahadomelina dia mety ho mavitrika mandritra ny fotoana lava na mandritra ny ora vitsivitsy. Rehefa vita ny doka voalohany dia ampahafantarao amin'ny dokotera ny zava-niainana mba hahafahan'izy ireo manomboka amin'ny fotoana fohy. Ho an'ireo mpampiasa zava-mahadomelina vaovao dia azo atao ny manomboka amin'ny dosages kely izay mety hampitombo azy aorian'ny fampiasana ny vatana. Rehefa tapitra ny vanim-potoana mivezivezy mavitrika, ny antsasaky ny zava-mahadomelina dia hitoetra eo amin'ny rànao, ary dia mbola hankafy ny vokatra Phenylpiracetam ianao. Ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia afaka mampivelatra haingana ny fandeferana Phenylpiracetam, ka noho izany dia ilaina ny fampiasana zava-mahadomelina toy ny fampiroboroboana ara-pahasalamana fa tsy fanampiana isan'andro.
Ity zava-mahadomelina ity dia anisan'ireo zava-mahadomelina mahomby indrindra izay ho hitanao eo amin'ny tsena, ary noho izany, raha tsy mitandrina amin'ny dosage ianao, dia mety hampisongadina anao ny fiantraikany mahery vaika. Tahaka ireo racetams hafa, dia mora mora aminao ny miaina vatana rehefa avy naka ny dosage izay nanjavona aorian'ny fotoana. Na izany aza, raha maharitra ela kokoa ny loha, dia hevitra tsara ny mampahafantatra amin'ny dokotera anao. Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fahatsapana ny vokatra hafa dia ny miaraka amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny loharano choline toy Alpha GPC. Ny Phenylpiracetam dia mety hitarika ho amin'ny fiankinan-doha, ary noho izany dia tokony horaisina ao anatin'ny bisikiletany. Na izany aza, mety ho azo antoka kokoa raha raisinao ny zava-mahadomelina raha ilaina ny fanatsarana ny fahalalana, fifantohana, ary fahatsiarovana.
Ankoatra izany dia asaina manome anao Phenylpiracetam 2 isan'andro isan-kerinandro ho fanafody ho an'ny fiankinan-doha. Ny fikorontanana nootropic dia hevitra tsara ihany koa mba hampihenana ny vokatra hafa, saingy tsy miasa tsara ho an'ny rehetra izy ireo. Indraindray dia tsy afaka miasa ho anao ny tabilao fa hiasa tsara amin'ny namanao. Ny fampitandremana tsara indrindra azonao ampiasaina rehefa mampiasa Phenylpiracetam dia ny mikaroka amin'ny dokotera mba hahitana ny fanampiana tsara indrindra amin'ny fikarakarana ity medikaly mahomby ity ho an'ny vokatra tsara kokoa. Ny fividianana ny zava-mahadomelina eo amin'ny toby dia mety hampidi-doza na dia manana fahafahana miditra aminy aza.
Ny fividianana Phenylpiracetam dia mety ho sarotra indraindray satria tsy azonao ny toerana ahafahanao mahazo ny zava-mahadomelina. Na dia izany aza dia tsy tokony ho olana intsony izany satria afaka mametraka mora foana ny baiko an-tserasera amin'ny mpivarotra an-tserasera isan-karazany ianao ary atolotra eo an-tokotaninao ao anatin'ny fotoana fohy. Ny asanao dia ny hahita ny mpivarotra marina izay mametraka amin'ny fotoana ny entana sy ny tahiry fanafody kalitao. Tsy ny mpivarotra rehetra hitanao anaty aterineto no azo atokisana fa ny sasany mety handiso fanantenana anareo indraindray. Buy nootropics avy amin'ny mpivarotra efa za-draharaha sy malaza. Jereo ireo fanavaozana mpanjifa isan-karazany momba ny mpivarotra alohan'ny fanapahan-kevitra hametraka ny baiko. Aza manahaka ny olona maro mijery ny vidiny fa tsy mifantoka amin'ny hatsaran'ny vokatra sy ny fanompoana atolotra. Tokony homena laharam-pahamehana ny lazan'ny mpivarotra raha tsy te hanenina ianao any aoriana. Raha manana namana izay nampiasa ny Phenylpiracetam ianao, tsara kokoa hatramin'ny nanondroany anao ny mpivarotra tsara indrindra. Azonao jerena mividy Phenylpiracetam bulk na ampy fotsiny ho an'ny dosage fohy.
Ny dokotera koa dia olona azo itokisana hafa izay afaka manampy anao hahazo ny mpivarotra Phenylpiracetam mety na amin'ny aterineto na amin'ny toerana rehetra. Aza maika hitazona ny filaminana alohan'ny fikarohana mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny mpivarotra. Ny sarany dia mety ho zava-dehibe, saingy mila mitandrina tsara ianao raha mila mividy vokatra tsara. Rehefa mividy ny Phenylpiracetam dia aza mandray dôsina alohan'ny handraisanao ny dokotera satria mety hampiharihary ny fiantraikany mahatsiravina izay mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamanao.